यशैया 18 ERV-NE - कूश देशलाई - Bible Gateway
कूश देशलाई परमेश्वरको सन्देश
18 कूश देशसँग नदीहरू जोडिएको जमीनलाई हेर। त्यो ठाउँमा कीराहरू छन्; तिनीहरूले चलाएको पखेंटाहरू बजाएको आवाजहरू सुन्न सक्छौ।2त्यस जग्गामा मानिसहरूलाई मालिङ्गोले [a] बनिएका डुङ्गाहरूमा पठाइन्छ।
हे फूर्तिला समाचार-वाहकहरू!
ती मानिसहरूकहाँ जाऊ जो अग्ला र बलिया छन्!
सबै ठाउँका मानिसहरू ती अल्गा,
अनि बलिया मानिसहरूदेखि डराउँछन्।
तिनीहरू बलियो जाति हुन्।
तिनीहरूले अन्य जातिहरूलाई परास्त पार्छन्।
नदीहरूले भाग-भाग गरेका देशमा तिनीहरू छन्।
3 संसारका सारा मानिसहरूले तिनीहरूमाथि घट्ने घट्ना हेर्नेछन्।
पर्वतमाथि स्पष्ट रूपमा उठेको झण्डा झैं तिनीहरूले त्यो घट्ना देख्नेछन्।
ती अग्ला मानिसहरूमाथि त्यस्तो घट्ना घट्न गएको खबर पृथ्वीका सबै मानिसहरूले सुन्नेछन्।
युद्ध प्रारम्भ हुनु अघि फुकेको तुरहीको आवाज जस्तै स्पष्ट रूपमा तिनीहरूले सुन्नेछन्।
4 परमप्रभुले भन्नुभयो, “मेरा निम्ति तयार पारेको ठाउँमा म हुनेछु। म चुपचाप ती घटनाहरू भएको हेर्नेछु।5सुन्दर ग्रीष्मको दिनमा, मध्यदिनको बेला मानिसहरू आराम गरिरहेका हुन्छन्। यो गर्मीको फसल काट्ने समय हुनेछ तब त्यहाँ कुनै बर्षा हुनेछैन्, खाली बिहानको शीत मात्र पर्नेछ। त्यसपछि केही डरलाग्दो घटना घट्नेछ। त्यो पहिल्यै फूलहरू फुलेको समय हुनेछ। त्यो अङ्गुर पाकेको फल हुने अनि बढ्ने समय हुनेछ। तर बाली पाक्न अघि नै शत्रुहरू आउनेछन् अनि बुटाहरू काट्नेछन्। तिनीहरूले अङ्गुरका लहराहरू चूडँनेछन् अनि फ्याँक्नेछन्।6ती दाखका बोट-बिरूवाहरू पर्वतहरूबाट आउने चरा-चुरूङ्गीहरू र वन जनावरका निम्ति छोडिनेछ। चरा-चुरूङ्गीहरू त्यस दाखका बोटहरूमा ग्रीष्म कालको दिनमा बस्नेछन्। अनि जाडो महीनामा वनका पशुहरूले ती सबै खानेछन्।”
7 त्यस समय सेनाहरूका परमप्रभुलाई विषेश भेट चढाइनेछ। त्यो भेट ती अग्ला अनि बलिया मानिसहरूबाट हुनेछ, अत्याचारीहरू ती मानिसहरूसित भयभीत हुन्छन् जो नदीले छुट्‌याएको भूमिमा बस्छन्। यो भेट परमप्रभुको स्थल सियोन पर्वतमा ल्याइनेछ।
यशैया 18:2 मालिङ्गो एक प्रकारको मलबाँस भन्दा सानो निगाँलो भन्दा ठूलो उद्भिद् वा सानो प्रकारको बाँस।